५ अषाढ २०७६
फेसबुकले आगामी वर्ष लिब्रा नाम दिइएको एउटा नयाँ डिजिटल मुद्रा सुरु गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। उक्त सोसल मिडिया कम्पनीका अनुसार त्यस्तो मुद्रामार्फत् मानिसहरूले उसको आफ्नै एप्स तथा ह्वाट्सएपबाट आर्थिक कारोबार गर्न सक्नेछन्। भविष्यमा उबर र भिसाजस्ता कम्पनीले समेत त्यसलाई स्विकार गर्न सक्ने फेसबुकले बताएको छ। फेसबुकका अनुसार इन्टरनेटको पहुँचमा भएका र स्मार्टफोन बोक्ने सबैले लिब्रा प्रयोग गर्न सक्नेछन्। मानिसहरूले पैसाको बचत, लेनदेन र खर्च…विस्तृत समाचार »
अहिले तुरुन्तै केही लेख्नु पर्‍यो भने तपाईँ कलम लिएर कागजमा लेखिहाल्नुहुन्छ अथवा प्रविधिले सुसज्जित हुनुहुन्छ भने आफ्नोअगाडि भएको ट्याब्लटको स्क्रिनतिर लागिहाल्नुहुन्छ। गएको पाँच हजार वर्षमा यो पृथ्वीभरका मानिसहरू आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्ने माध्यमहरू पत्ता लगाउँदै र उपयोग गर्दै आइरहेका छन् र विभिन्न सभ्यताहरूले आआफ्ना प्रणाली विकास गरेका छन्। हस्तलेखनको इतिहास र यसको विकासक्रम खोज्न लण्डनस्थित ब्रिटिश लाइब्रेरीले उसको आफ्नो वृहत् भण्डारमा आधारित भएर सर्वसाधारण समक्ष…विस्तृत समाचार »
अमेरिकी टेलिकम्युनिकेसन नेटवर्क निर्माता कम्पनी एटीएन्डटीले फाइभजी नेटवर्कको सफल परीक्षण गरेको छ । परीक्षणको समयमा २ जीबीपीएसको इन्टरनेट स्पिड हासिल भएको छ । एट्लान्टामा गरिएको उक्त परीक्षणका लागि नेटगियर कम्पनीले तयार गरेको मोबाइल राउटर प्रयोग गरिएको थियो । परीक्षणपछि एटीएन्डटीले दुई घण्टाको एचडी मुभी केवल १० सेकेन्डमै डाउनलोड गर्न सकिएको बताएको छ । हाल कैयौं घण्टामा भैरहेको काम फाइभजी नेटवर्कमा केही मिनेटमै गर्न सकिनेछ ।…विस्तृत समाचार »
इजरायली वैज्ञानिकहरूले थ्रीडी प्रिन्टिङ प्रविधिको मद्दतबाट कोशिका र धमनी सहितको मुटु निर्माणमा सफलता हासिल गरेका छन । चिकित्सा विज्ञानको क्षेत्रमा यसलाई एउटा महत्वपूर्ण खोजका रूपमा लिइएको छ । यसअघि वैज्ञानिकहरूले मानव शरीरको कोषहरू मात्र बनाएका थिए । त्यसमा धमनी राख्न सकेका थिएनन् । यसको खास विशेषता भनेको यसलाई मानव कोशिकाहरूबाट निर्माण गरिनु हो । धमनीसहितको मुटु विकास गरिएको यो पहिलो घटना हो । इजरायलको तेल…विस्तृत समाचार »
३ बैशाख २०७६
नेपालको पहिलो भू–उपग्रह नेपाली स्याट–१’ बिहीबार अमेरिकाबाट ‘लन्च’ हुने भएको छ । नेपाली समयअनुसार बिहान २ बजेर ३१ मिनेटमा लन्च हुन लागेको नास्टको प्रविधि विभागले जनाएको छ । नेपालसँगै श्रीलंकाको रावना–१ र जापानको उगिसु भू–उपग्रह पनि प्रक्षेपण गर्ने तालिका छ । अमेरिकाको भर्जिनिया राज्यस्थित नासाको ‘मिड–एटलान्टिक स्पेसपोर्ट लन्च प्याड’ बाट स्याटेलाइट प्रक्षेपण हुनेछ । भू–उपग्रहलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्पेस स्टेसन (आईएसएस) मा लगिनेछ । यसका लागि सिग्नोस…विस्तृत समाचार »
३० अप्रिलदेखि यी स्मार्टफोनमा बन्द हुँदैछन् फेसबुक, इन्स्टा र मेसेन्जर, तपाईको फोन कुन ?
फेसबुक, मेसेन्जर र इन्स्टाग्राम केहि स्मार्टफोनमा ३० अप्रिलबाट बन्द हुँदैछ । विन्डोज फोनमा यो तिनवटै एप्सले काम गर्न बन्द हुनेछ । ३० अप्रिलबाट कुनै स्मार्टफोनमा फेसबुक, इन्स्टाग्राम र मेसेन्जर बन्द हुदैछ । माइक्रोसफ्टले यो निश्चित् गरेको छ कि विन्डोज फोनमा फेसबुक बन्द गर्ने तयारी गरेको छ । यदि तपाई संग पनि विन्डोज फोन छ भने तपाईको फोनमा सोसल मिडियाहरु चल्ने छैनन् । विन्डोज फोनमा सोसल…विस्तृत समाचार »
टिकटक कत्तिको मन पराउनुहुन्छ, होशियार ! यसरी असुरक्षित र खतरनाक छ
सामाजिक सञ्जाल ‘टिकटक’ बालबालिकादेखि जेष्ठ नागरिकसम्म लोकप्रिय हुँदै गएको छ । पाँचदेखि १५ सेकेन्डसम्मको भिडियो बनाउन मिल्ने यसमा गीत र संवादमा अभिनय गर्न सकिन्छ । खाना खाँदादेखि कार्यालयमा काम गर्दासमेतका टिकटक बनाएको पाइन्छ । सन् २०१६ देखि चीनबाट सुरु भएको टिकटकले मनोरञ्जन तथा अभिनयको लागि मात्र नभएर यसको बेफाइदा पनि छ । गोपनीयताको कुरा गर्ने हो भने टिककट निकै असुरक्षित र खतरनाक भएको तथा जो…विस्तृत समाचार »